Umlando Wenkampani - Anping County Ansheng Wire Meshes Product Co., Ltd.
I-Anping County Ansheng Wire Meshes Product Co., Ltd. yasungulwa ngo-1996 ngu-chen shun feng,
Ngo-1996, kwakuyisitolo esincane sehadiwe eGuangzhou, ikakhulu esasisebenza ngemishini yethusi nensimbi engagqwali yocingo
Ngo-1998,inkampani yamisa umnyango wocwaningo we-nickel. Okwe-nickel mesh, ukungeniswa kwamanye amazwe okishini lokuncibilikisa kanye nama-hlobo wohlobo oluhle kwengezwe, I-new nickel plating workshop, nomshini wokuluka ngocingo. Amasethi ayi-11 wemishini yokwaluka yaseJalimane angenisiwe ngenhloso yokwakha umdwebo wocingo, i-mesh nokusebenza okujulile. Uhlelo oluhlanganisiwe lokukhiqiza.
Ngo-2000, inkampani yasungula isakhiwo sefektri esingu-20,000m2 e-Anping, ukukhiqizwa okucwengisisiwe, ukucubungula, ukuhlolwa kwekhwalithi, ukupakisha nokuqedela, indawo yokugcina impahla kanye neminye iminyango ukukhulisa indawo yehhovisi.
Kusukela ngo-2001 kuya ku-2005, inkampani yakha i-epoxy mesh workshop entsha ne-workshop engenansimbi engagqwali, futhi ukuthengiswa kwayo kwonyaka kwamanye amazwe kufinyelele kwizigidi eziyi-100.
2005-2010 Indawo yokusebenzela yaguqulwa yaba yindawo yokusebenzela engenathuli yepende le-epoxy resin
2010-2015 ngamakhasimende aseJalimane athuthukise ishubhu lokuvunguza nokushaya isibhakela uchungechunge, uchungechunge lwe-gearbox lemishini yokuhlunga uchungechunge.
Ngo-2016, Ihhovisi laseShijiazhuang lasungulwa,
Ngo-2017, umnyango wezingcingo wokucubungula ojulile wasungulwa ukufaka imboni yepulasitiki yokuhlunga, imboni yeplastiki ye-extrusion, imishini yokushisela yaseJalimane engenayo, imishini yokusika i-laser, nokwanda kwesikhathi sokulethwa nokuqinisekiswa kwekhwalithi.
Ngo-2018, ukuthuthukiswa kwezinto zokuhlunga uthuli embonini yepulasitiki nokuthuthukiswa kwezinto zokuhlunga izihlungi kwasungulwa.
Ngo-2019, umnyango wokuhlanza amanzi nowokuhlunga amanzi wasungulwa ukuze kuthuthukiswe uhlaka lwe-Expanded metal mesh series filter filter.